ဖတ်မိတိုင်း မချိအောင် ရင်နာရတဲ့စာ – ရှအေလငျး
တချိန်ကတအားဆင်းရဲခဲ့တဲ့ ဒီနိုင်ငံဟာဘာကြောင့် မြန်မာထက်သာသွားရတာလဲ ဖတ်ကြည့်ပါ ! လူတိုင်းသိသင့်ပါတယ် !
အီသီယိုးပီယားဟာ လူဦးရေ ၉၉ သန်းကျော်ရှိပြီး မြန်မာနိုင်ငံထက် အနည်းငယ် ပိုမို ကျယ်ဝန်းပေမယ့်လည်း ကုန်းတွင်းပိတ်နိုင်ငံ ဖြစ်ပါတယ်…
အီသီယိုးပီယားဟာ ကမ္ဘာ့တိုးတက်မှု အမြန်ဆုံး ၁၀ နိုင်ငံထဲ ပါဝင်ပြီး မြန်မာကိုလည်း ကျော်တက်သွားခဲ့ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လို့ ထင်ပါသလဲ…။
အစိုးရ ဘတ်ဂျက်ကို ကြည့်ပါက ၆၅ ရာနှုံးကနေ ၇၀ ရာနှုံးအထိကို ပညာရေးနဲ့ ဆင်းရဲသားဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ သုံးထားတာကို စတွေ့တာပါပဲ…။
စစ်ရေးအသုံးစရိတ်က ၂၀၁၂ စာရင်းအရ ၁ ရာနှုံးတောင် မပြည့်ပါဘူးတဲ။ ၀.၉၁ ရာနှုံးသုံးပါတယ်။ မြန်မာနဲ့ ကွာချက်နော်။
စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီ စနစ်ကို ကျင့်သုံးတော့ ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံကြီးတွေရဲ့ ODA (Official Development Assistance) တွေ အဆက် မပြတ်ရတာလဲ တစ်ချက်ပါပဲ။ ၂၀၀၃ ကနေ ၂၀၁၂ အထိ ရရှိတဲ့ ODA ကတော့ ဝိုး …… ၂၉ ဘီလီယံဒေါ်လာ အထိ ရှိပါတယ်တဲ့။ စတုတ္ထ အများဆုံး ODA လက်ခံရရှိတဲ့နိုင်ငံပါ။
သူတို့ဟာ အခြေခံ အဆောက်အအုံတွေကို အဓိကတည်ဆောက်တယ်၊ ကားလမ်းနဲ့ LRT train system တွေဟာ ရှယ်ပါပဲ၊
စွမ်းအင် ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းကလည်း မြင့်မားလှပါတယ်။ မကြာခင်မှာ တိုင်းပြည်အတွက် လုံလောက်တဲ့အပြင် နိုင်ငံခြားကို လျှပ်စစ် စွမ်းအင်တွေ ထုတ်ရောင်းနိုင်တော့မယ် …။
တကယ်ပါ… ပိုလျှံတယ်ဆိုတာ မြန်မာမှာလို ယုံတမ်းစကားမဟုတ်ဘူးနော်။
မိုဘိုင်းဆက်သွယ်ရေး 4G စနစ် ရပြီဖြစ်ပြီး ကောင်းမွန်လှပါတယ်။
ကြီးမားလှတဲ့ ပြည်သူ့ အိမ်ယာ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းတွေဟာ အလုပ်သမား အများအပြားအတွက် အလုပ်အကိုင်နဲ့ အသေးစား ကုန်ထုတ် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများစွာ အတွက် အဆင်ပြေစေတယ်။
မြန်မာက ကျူးကျော်တဲလေးတွေ အတွက်တော့ လွမ်းစရာပေါ့ …။
သူရဲ့ GDP ရဲ့ ၈၀ ကနေ ၈၅ ရာနှုံးကို စိုက်ပျိုးရေးက ရရှိပေမယ့် ကုန်ချောထုတ်လုပ်ငန်းများ ပေါ်ပေါက်လာဖို့ကို ဦးတည်ထားပြီး မြောက်များစွာသော အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ဖန်တီးပေးနိုင်ဖို့ ရည်ရွယ်ထားတယ်။
ဖိနပ်၊ သားရေ၊ အဝတ်အထည်၊ ကော်ဖီလုပ်ငန်းက ထုတ်ကုန်တွေဟာ ဥရောပနဲ့ အမေရိက ကိုတင်ပို့နေပြီ။
အစိုးရနဲ့ အလှူရှင်နိုင်ငံများ၊ လယ်သမားတွေရဲ့ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုနဲ့ စိုက်ပျိုးရေးထုတ်ကုန်များ အဆင့်မမှီဘူးဆိုတဲ့ ယခင် ပုံရိပ်ကို ဖျောက်ပြစ်နိုင်ခဲ့ကြတယ်။
ယခင် နှစ် ၂၀ နဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရင် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပမှ ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ မျိုးများ၊ နည်းစနစ်များ၊ ဓာတ်မြေသြဇာများ ရရှိနေကြပြီ။
စက်မှုလယ်ယာကို ကျွမ်းကျင် ပိုင်နိုင်တဲ့ လယ်သမားတွေဟာလည်း နိုင်ငံတိုးတက်မှုရဲ့ ပြယုဂ်အနေနဲ့ ရှိကြပါတယ်။
အနှစ်နှစ်အလလ စက်မှုလယ်ယာ မအောင်မြင်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ အတုယူဖွယ်ပါပဲ။
ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေဟာလည်း လျှင်မြန်စွာ တိုးတက်ကြီးထွားလာပြီး အလုပ်အကိုင် အခွင့်အရေးများစွာ ဖန်တီးပေးနေတယ်။
အီသီယိုပီးယား လေကြောင်း လိုင်းဆိုတာ အာဖရိကမှာ ကင်ညာလေကြောင်း လိုင်း နဲ့အပြိုင် နံပါတ်တစ်ကို လုနေတဲ့။ ကမ္ဘာ့ အကောင်းဆုံး လေကြောင်းလိုင်း ၁၀၀ မှာ အဆင့် ၇၇ ချိတ်တယ်တဲ့။
ခေတ်မီ ဘိုးရင်း နဲ့ အဲဘတ်စ် လေယာဉ်ကြီးပေါင်း ၇၄ စင်း နဲ့ နိုင်ငံတကာ လေဆိပ်ပေါင်း ၁၂၄ ခုကို ပျံသန်း နေတဲ့ လေကြောင်းလိုင်းကြီး ဖြစ် နေတယ်။
မြန်မာပြည်လေယာဉ်ကွင်းမှာ ဆင်းလို့မရတဲ့ Beoing 787 လေယာဉ်ကြီးတွေတောင် ပိုင်နေတာပါတဲ့။
မြို့တော် အက်ဒစ်စ် အဘာဘာမှာ LRT လျှပ်စစ်ရထား စီမံကိန်း ပြေးဆွဲနေပြီ။ ဒီစီမံကိန်းအတွက် ကန်ဒေါ်လာ သန်း ၄၇၀ သုံးစွဲခဲ့ပါတယ်။
၁၇ ကီလိုမီတာ ခရီးစဉ် စဆုံးကို စီးနင်းဖို့ ၂၀ ဆင့် မြန်မာငွေ ၂၆၀ လောက် ကျမှာဖြစ်ပါတယ်။
အင်း … မြန်မာမှာတော့ လူမစီးတဲ့ နေရာမှာ လျှပ်စစ်ရထားလေး for show လုပ်ပြဦးမယ်။
မြို့တော် အက်ဒစ်စ် အဘာဘာဟာ အာဖရိကတိုက်ရဲ့ နေချင့်စဖွယ်အကောင်းဆုံး မြို့တော်တွေထဲမှာ နံပါတ် ၈ ချိတ်ပါသတဲ့..။
ရန်ကုန်ကတော့ အမှိုက်သရိုက်တွေ၊ ကား ဂျမ်းဖြစ်မှုတွေ၊ မညီမညာ တိုက်တန်းတွေနဲ့ စုတ်ပြတ်နေရပြီ။
လူ တစ်ဦးချင်း ဝင်ငွေကတော့ ၂၀၁၄ မှာ ခန့်မှန်း ဒေါ်လာ ၁၆၀၀ ဖြစ်တယ်။
၂၀၁၄ မှာ စီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှုန်း ၁၀.၃ ရာနှုံးဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ့ တိုးတက်မှု အမြန်ဆုံး ၁၀ နိုင်ငံထဲမှာပါဝင်ပါတယ်။
အာဖရိကတိုက်ရဲ့ အဂတိလိုက်စားမှု အများဆုံး နိုင်ငံထဲမှာမပါခြင်းကလည်း ဒီလိုတိုးတက်စေတာဖြစ်ပါတယ်။
ကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံး သူဌေးကြီး ဘီလ်ဂိတ်ဟာ သူ့ဖောင်ဒေးရှင်းရုံးစိုက်ဖို့ အာဖရိက နိုင်ငံ အများကြီးထဲက ဘာလို့ ရွေးချယ်လဲဆိုတော့ အီသီယိုပီးယား အစိုးရရဲ့ ကတိကဝတ်ကို ယုံကြည်ရလို့ပါတဲ….။
တကယ်တော့ အီသီယိုပီးယားနိုင်ငံ ဆိုတာ ၁၉၈၃ မှာ ငတ်မွတ်ခေါင်းပါး ဘေးဆိုက်လို့ လူဦးရေ ၁ သန်းလောက်သေခဲ့ရတဲ့ နိုင်ငံပါ။
မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင် စတဲ့ အနုပညာရှင်တွေ ဦးဆောင်ပြီး We are the World လို သီချင်းတွေ စပ်ဆို အလှုခံ ကျွေးခဲ့ရတာပါ။
မြန်မာပြည်ကတော့ ဆန်အိတ်တွေ တင်ပို့ပြီး ထောက်ပံပေးခဲ့ရပါသေးတယ်။
အခုတော့ မြန်မာနိုင်ငံကို အပြတ်ဖြတ်ကျော်သွားပါပြီ။
သူတို့တွေရဲ့ Do and Don’t ဆောင်ပုဒ်က ငါတို့ အငတ်ဘေး ပြန်မဆိုက်အောင် ကြိုးစားကြ၊ ညီညွှတ်ကြပါတဲ့။
မြန်မာပြည်လို မညီမညွှတ်မဖြစ်စေနဲ့တဲ့။ ခုထိ မညီညွတ်လို့ ငါတို့နောက်မှာ ကျန်ခဲ့ပြီလို့ သတိပေးကြပါတယ်တဲ့။
ရေးသားသူ – Shwe Moe Hei & BKL
တခြိနျကတအားဆငျးရဲခဲ့တဲ့ ဒီနိုငျငံဟာဘာကွောငျ့ မွနျမာထကျသာသှားရတာလဲ ဖတျကွညျ့ပါ ! လူတိုငျးသိသငျ့ပါတယျ !
အီသီယိုးပီယားဟာ လူဦးရေ ၉၉ သနျးကြျောရှိပွီး မွနျမာနိုငျငံထကျ အနညျးငယျ ပိုမို ကယျြဝနျးပမေယျ့လညျး ကုနျးတှငျးပိတျနိုငျငံ ဖွဈပါတယျ…
အီသီယိုးပီယားဟာ ကမ်ဘာ့တိုးတကျမှု အမွနျဆုံး ၁၀ နိုငျငံထဲ ပါဝငျပွီး မွနျမာကိုလညျး ကြျောတကျသှားခဲ့ပါတယျ။ ဘာကွောငျ့လို့ ထငျပါသလဲ…။
အစိုးရ ဘတျဂကျြကို ကွညျ့ပါက ၆၅ ရာနှုံးကနေ ၇၀ ရာနှုံးအထိကို ပညာရေးနဲ့ ဆငျးရဲသားဖှံ့ဖွိုးရေးလုပျငနျးတှမှော သုံးထားတာကို စတှတေ့ာပါပဲ…။
စဈရေးအသုံးစရိတျက ၂၀၁၂ စာရငျးအရ ၁ ရာနှုံးတောငျ မပွညျ့ပါဘူးတဲ။ ဝ.၉၁ ရာနှုံးသုံးပါတယျ။ မွနျမာနဲ့ ကှာခကျြနျော။
စဈမှနျတဲ့ ဒီမိုကရစေီ စနဈကို ကငျြ့သုံးတော့ ဒီမိုကရစေီ နိုငျငံကွီးတှရေဲ့ ODA (Official Development Assistance) တှေ အဆကျ မပွတျရတာလဲ တဈခကျြပါပဲ။ ၂၀၀၃ ကနေ ၂၀၁၂ အထိ ရရှိတဲ့ ODA ကတော့ ဝိုး …… ၂၉ ဘီလီယံဒျေါလာ အထိ ရှိပါတယျတဲ့။ စတုတ်ထ အမြားဆုံး ODA လကျခံရရှိတဲ့နိုငျငံပါ။
သူတို့ဟာ အခွခေံ အဆောကျအအုံတှကေို အဓိကတညျဆောကျတယျ၊ ကားလမျးနဲ့ LRT train system တှဟော ရှယျပါပဲ၊
စှမျးအငျ ထုတျလုပျနိုငျစှမျးကလညျး မွငျ့မားလှပါတယျ။ မကွာခငျမှာ တိုငျးပွညျအတှကျ လုံလောကျတဲ့အပွငျ နိုငျငံခွားကို လြှပျစဈ စှမျးအငျတှေ ထုတျရောငျးနိုငျတော့မယျ …။
တကယျပါ… ပိုလြှံတယျဆိုတာ မွနျမာမှာလို ယုံတမျးစကားမဟုတျဘူးနျော။
မိုဘိုငျးဆကျသှယျရေး 4G စနဈ ရပွီဖွဈပွီး ကောငျးမှနျလှပါတယျ။
ကွီးမားလှတဲ့ ပွညျသူ့ အိမျယာ ဆောကျလုပျရေး လုပျငနျးတှဟော အလုပျသမား အမြားအပွားအတှကျ အလုပျအကိုငျနဲ့ အသေးစား ကုနျထုတျ စီးပှားရေး လုပျငနျးမြားစှာ အတှကျ အဆငျပွစေတေယျ။
မွနျမာက ကြူးကြျောတဲလေးတှေ အတှကျတော့ လှမျးစရာပေါ့ …။
သူရဲ့ GDP ရဲ့ ၈၀ ကနေ ၈၅ ရာနှုံးကို စိုကျပြိုးရေးက ရရှိပမေယျ့ ကုနျခြောထုတျလုပျငနျးမြား ပျေါပေါကျလာဖို့ကို ဦးတညျထားပွီး မွောကျမြားစှာသော အလုပျအကိုငျ အခှငျ့အလမျး ဖနျတီးပေးနိုငျဖို့ ရညျရှယျထားတယျ။
ဖိနပျ၊ သားရေ၊ အဝတျအထညျ၊ ကျောဖီလုပျငနျးက ထုတျကုနျတှဟော ဥရောပနဲ့ အမရေိက ကိုတငျပို့နပွေီ။
အစိုးရနဲ့ အလှူရှငျနိုငျငံမြား၊ လယျသမားတှရေဲ့ ပူးပေါငျးပါဝငျမှုနဲ့ စိုကျပြိုးရေးထုတျကုနျမြား အဆငျ့မမှီဘူးဆိုတဲ့ ယခငျ ပုံရိပျကို ဖြောကျပွဈနိုငျခဲ့ကွတယျ။
ယခငျ နှဈ ၂၀ နဲ့ နှိုငျးယှဉျရငျ ပွညျတှငျး၊ ပွညျပမှ ပိုမိုကောငျးမှနျတဲ့ မြိုးမြား၊ နညျးစနဈမြား၊ ဓာတျမွသွေဇာမြား ရရှိနကွေပွီ။
စကျမှုလယျယာကို ကြှမျးကငျြ ပိုငျနိုငျတဲ့ လယျသမားတှဟောလညျး နိုငျငံတိုးတကျမှုရဲ့ ပွယုဂျအနနေဲ့ ရှိကွပါတယျ။
အနှဈနှဈအလလ စကျမှုလယျယာ မအောငျမွငျတဲ့ မွနျမာနိုငျငံ အတုယူဖှယျပါပဲ။
ဝနျဆောငျမှုလုပျငနျးတှဟောလညျး လြှငျမွနျစှာ တိုးတကျကွီးထှားလာပွီး အလုပျအကိုငျ အခှငျ့အရေးမြားစှာ ဖနျတီးပေးနတေယျ။
အီသီယိုပီးယား လကွေောငျး လိုငျးဆိုတာ အာဖရိကမှာ ကငျညာလကွေောငျး လိုငျး နဲ့အပွိုငျ နံပါတျတဈကို လုနတေဲ့။ ကမ်ဘာ့ အကောငျးဆုံး လကွေောငျးလိုငျး ၁၀၀ မှာ အဆငျ့ ၇၇ ခြိတျတယျတဲ့။
ခတျေမီ ဘိုးရငျး နဲ့ အဲဘတျဈ လယောဉျကွီးပေါငျး ၇၄ စငျး နဲ့ နိုငျငံတကာ လဆေိပျပေါငျး ၁၂၄ ခုကို ပြံသနျး နတေဲ့ လကွေောငျးလိုငျးကွီး ဖွဈ နတေယျ။
မွနျမာပွညျလယောဉျကှငျးမှာ ဆငျးလို့မရတဲ့ Beoing 787 လယောဉျကွီးတှတေောငျ ပိုငျနတောပါတဲ့။
မွို့တျော အကျဒဈဈ အဘာဘာမှာ LRT လြှပျစဈရထား စီမံကိနျး ပွေးဆှဲနပွေီ။ ဒီစီမံကိနျးအတှကျ ကနျဒျေါလာ သနျး ၄၇၀ သုံးစှဲခဲ့ပါတယျ။
၁၇ ကီလိုမီတာ ခရီးစဉျ စဆုံးကို စီးနငျးဖို့ ၂၀ ဆငျ့ မွနျမာငှေ ၂၆၀ လောကျ ကမြှာဖွဈပါတယျ။
အငျး … မွနျမာမှာတော့ လူမစီးတဲ့ နရောမှာ လြှပျစဈရထားလေး for show လုပျပွဦးမယျ။
မွို့တျော အကျဒဈဈ အဘာဘာဟာ အာဖရိကတိုကျရဲ့ နခေငျြ့စဖှယျအကောငျးဆုံး မွို့တျောတှထေဲမှာ နံပါတျ ၈ ခြိတျပါသတဲ့..။
ရနျကုနျကတော့ အမှိုကျသရိုကျတှေ၊ ကား ဂမျြးဖွဈမှုတှေ၊ မညီမညာ တိုကျတနျးတှနေဲ့ စုတျပွတျနရေပွီ။
လူ တဈဦးခငျြး ဝငျငှကေတော့ ၂၀၁၄ မှာ ခနျ့မှနျး ဒျေါလာ ၁၆၀၀ ဖွဈတယျ။
၂၀၁၄ မှာ စီးပှားရေးတိုးတကျမှုနှုနျး ၁၀.၃ ရာနှုံးဖွဈပွီး ကမ်ဘာ့ တိုးတကျမှု အမွနျဆုံး ၁၀ နိုငျငံထဲမှာပါဝငျပါတယျ။
အာဖရိကတိုကျရဲ့ အဂတိလိုကျစားမှု အမြားဆုံး နိုငျငံထဲမှာမပါခွငျးကလညျး ဒီလိုတိုးတကျစတောဖွဈပါတယျ။
ကမ်ဘာ့အခမျြးသာဆုံး သူဌေးကွီး ဘီလျဂိတျဟာ သူ့ဖောငျဒေးရှငျးရုံးစိုကျဖို့ အာဖရိက နိုငျငံ အမြားကွီးထဲက ဘာလို့ ရှေးခယျြလဲဆိုတော့ အီသီယိုပီးယား အစိုးရရဲ့ ကတိကဝတျကို ယုံကွညျရလို့ပါတဲ….။
တကယျတော့ အီသီယိုပီးယားနိုငျငံ ဆိုတာ ၁၉၈၃ မှာ ငတျမှတျခေါငျးပါး ဘေးဆိုကျလို့ လူဦးရေ ၁ သနျးလောကျသခေဲ့ရတဲ့ နိုငျငံပါ။
မိုကျကယျဂကျြဆငျ စတဲ့ အနုပညာရှငျတှေ ဦးဆောငျပွီး We are the World လို သီခငျြးတှေ စပျဆို အလှုခံ ကြှေးခဲ့ရတာပါ။
မွနျမာပွညျကတော့ ဆနျအိတျတှေ တငျပို့ပွီး ထောကျပံပေးခဲ့ရပါသေးတယျ။
အခုတော့ မွနျမာနိုငျငံကို အပွတျဖွတျကြျောသှားပါပွီ။
သူတို့တှရေဲ့ Do and Don’t ဆောငျပုဒျက ငါတို့ အငတျဘေး ပွနျမဆိုကျအောငျ ကွိုးစားကွ၊ ညီညှတျကွပါတဲ့။
မွနျမာပွညျလို မညီမညှတျမဖွဈစနေဲ့တဲ့။ ခုထိ မညီညှတျလို့ ငါတို့နောကျမှာ ကနျြခဲ့ပွီလို့ သတိပေးကွပါတယျတဲ့။
ရေးသားသူ – Shwe Moe Hei & BKL
ဆိုင်ကယ်နှစ်စီးကို ကားအဖြစ်ပြောင်းလဲသူ သရက်မြို့သား
ကျောင်းသွားခါနီး တိတ်တိတ်လေးချန်ခဲ့တဲ့ သမီးလေးရဲ့ စာတစ်စောင်ကြောင့်...
အင်္ဂလန်နိုင်ငံက ရေငုပ်ကျွမ်းကျင် ဂျွန် ဟာ ဂူထဲမှာ သူရေငုပ်ရင်း...